Ngasiphi yobudala ingane kufanele badinga umcamelo
Umcamelo - Imfanelo esisemqoka wobuthongo amnandi, okungadingi ukuphatha ngobuningi abantu. Eyezingane ezincane, le-accessory unendima ekhethekile futhi ukhethwa ikhumbula izici yokwakheka komzimba. Ukuze uqinisekise ukuthi ingane yakho hhayi kuphela wajabulela iphupho, kodwa lungamelela embhedeni isidleke ethokomele, indlela kukhethwa imicamelo ngokucophelela okukhulu. Kuyadingeka ukuba inake wonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukuthi ungaba ku ukuqhubeka emgogodleni ithonya lengane. Ngokungalungile wacosha isiguqo ukuze umntwana angakwazi ke ibe imbangela izifo ezingathi sína kwababhemayo.
Okokuqala, kudingeka siqonde lokho yobudala umntwana kudingeka umcamelo. izici bokuphila izinsana enyakeni 1 vumela kahle ngaphandle kwalo. Ezinganeni walonyaka ukuba ngokwemvelo ngesikhathi sokulala phezu flat.
Ukuze enze izinto ngendlela wemfanelo yombuzo lokho ubudala kudingeka umcamelo ngomntwana, kubalulekile ukuba le nkinga ochwepheshe - nodokotela bezingane kanye orthopedists. Ukusabela Medical ocacile: isiguqo ngisho ubukhulu kulencane ungaba nethonya elibi endleleni impilo ndoda omncane. It kuvela ukuthi ukusetshenziswa umcamelo ngesikhathi sokulala ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu 1 kungaholela kwaba nemiphumela emibi nakakhulu kwalokho esingakucabanga. Usongo esikhulu kungenzeka ukuthuthukisa ukugobeka komhlandla we wesibeletho thoracic, ngakho njalo umama idinga ukwazi ngasiphi yobudala umntwana kudingeka umcamelo.
Kodwa kunokuningi okungakhulunywanga ngakho. Uma esanda kuzalwa wakho ezifana azalwa naso torticollis kwemisipha, ukusetshenziswa umcamelo kuyadingeka, kodwa hhayi evamile, futhi amathambo futhi isampula kuphela enjalo, njengoba batusa udokotela.
Ezinganeni ngemva konyaka, lapho yomgogodla uye waqina, ungasebenzisa pads owayemude encane, kodwa kufanele kwenziwe kahle. Qiniseka ukuqinisekisa ukuthi isikhundla ikhanda ngesikhathi sokulala. Asikwazi ukuvumela emahlombe kanye nenhloko ibekwe ukuze akha angela enkulu phakathi kwazo. Ingane kufanele embondelene ukuze umcamelo enikeziwe kanye nenhloko yalo yesithathu engenhla esifubeni. Esimweni esinjalo, esicamelweni umntwana ukuba adalule obucayi wesibeletho amathambo ingane umthwalo ngokweqile.
Elinye iphuzu elibalulekile - ungakhethi esithambile futhi, isiguqo okusezingeni eliphezulu. Kukhona kungenzeka ukuthi umntwana angakwazi bangcwabe ekhaleni lakho kuwo futhi ngenxa ukungakwazi ngenkuthalo roll kungaba ucishe.
Ekucubunguleni umbuzo, ngasiphi yobudala umntwana kudingeka umcamelo, kungcono ukuba banake omunye, kubaluleke - njengoba kufanele kube. Ngaphambili, omama abaningi bakhetha ukusebenzisa eligoqiwe izikhathi eziningana pelenochku yefulaneli. Manje ingane izingubo imakethe inikeza zokulala elula futhi ephephile eziye ihlolwe futhi igunyazwe. Uma isabelomali ayikuvumeli ukuba bathenge imikhiqizo yegama lomkhiqizo, esicamelweni izingane elingangena ngokuphepha indawo eligoqiwe izikhathi eziningana ithawula. Isikhundla ukuze igebe eliphakathi ikhanda kanye emahlombe ingane nje degrees ezingaphezu kwezingu-30.
Okwamanje, phakathi imikhiqizo izingane njalo abasafufusa izinto ezintsha. Ngokwesibonelo, umcamelo ezicacile zomzimba enganeni. Uneziqu sici ezifana umgodi phakathi elikuvumela ukuba sizikhandle beka ekhanda wengane. Lokhu okusungulile kusekelwe ulwazi anatomy, ngesisekelo okuyinto, ososayensi balinganisela ukuphakama kahle komqamelo. Kuyinto 3 cm begodu skirting ukuphakama - 4.5 cm.
Futhi akufake ngoba ingane ingase ibe ngesimo roller asekelayo, esakhiwa fillers hypoallergenic. Lolu hlobo kubhekwa ngokuphelele ephephile ekahle kakhulu izingane.
Ngasiphi yobudala ingane kufanele badinga umcamelo ubuthongo ngosuku, niyazi, kodwa lesi sici liyadingeka hhayi kuphela ukubeka umntwana ukulala. Cushion lubaluleke, lapho ingane iqala ahlale, kodwa kulokhu kukhona okunye indima - ukusekela emuva womntwana, ukuze uzizwe ukhululekile kulesi sikhundla ezingajwayelekile okwamanje.
Izinqwaba umntwana - Sekujutshwe komama kancane ukubuyisa!
Pioneer uthayi - indlela tie? Step by step Umhlahlandlela
Yokushayela umsizi: ukuqeqeshwa kanye nemisebenzi